HTML एक्स्ट्रक्टर के हो? Semalt HTML उपकरणहरू बाट पाठ झिक्न प्रसिद्ध उपकरण प्रस्तुत गर्दछ
एक एचटीएमएल एक्स्ट्रैक्टर वा स्क्रेपर भनेको उपकरण हो जसले मेटा-ट्याग, मेटा वर्णन र सामग्रीको एक टुक्राको शीर्षकहरू निकाल्छ। साधारण HTML कागजातहरूबाट डाटा प्राप्त गर्न तपाईसँग आधारभूत कोडिंग सीपहरू हुनु पर्छ। तर परिष्कृत एचटीएमएल कागजातहरूका लागि तपाईले भरपर्दो सामग्री एक्सट्रैक्टर वा स्क्रैपर प्रयोग गर्नु पर्छ। त्यहाँ जाभा, पाइथन, PHP, NodeJS, C ++, र JS जस्ता फरक प्रोग्रामिंग भाषाहरू छन् जुन तपाईले दुबै साधारण र जटिल HTML फाइलहरूबाट सामग्री निकाल्न सिक्नु पर्छ। तपाईको HTML सम्बन्धी कार्यहरूको लागि, निम्न उपकरणहरू उत्तम हुन्।
Import.io इन्टरनेटमा एक उत्तम सामग्री स्क्र्यापर्स र एचटीएमएल एक्सट्रैक्टरहरू मध्ये एक हो। यसले बहु भाषाहरू र स्लाइसहरूमा संचालन गर्दछ र तपाईंको HTML कागजातलाई पासा गर्दछ, टेबल र सूचीहरूको रूपमा डाटा उत्पादन गर्दछ। यस कार्यक्रमले JSON ढाँचामा तपाइँको मेटाडाटा डाउनलोड गर्न विकल्पहरू प्रदान गर्दछ।
अक्टोपार्स प्रयोग गरेर, तपाईं विभिन्न वेब पृष्ठहरूबाट डाटाको एक विशाल रकम निकाल्न सक्नुहुन्छ। यो इन्टरनेटमा सब भन्दा कुशल एचटीएमएल एक्सट्रैक्टरहरू मध्ये एक हो जुन संरचना र असुरक्षित फार्ममा दुबै डाटा स्क्र्याप गर्न सक्छ। अक्टोपार्से छवि, HTML फाइल, पाठ फाइल, भिडियो, र अडियोहरूको उपयोगी डाटा लिन्छ।
Uipath प्रयोग गरेर, तपाईं सजिलैसँग फारम भर्न र नेभिगेसन स्वचालित गर्न सक्नुहुनेछ। यो एक सही, सरल र अद्भुत HTML एक्स्ट्रक्टर र इन्टरनेटमा सामग्री स्क्रेपर हो। युआईपाथले जे.एस., सिल्वरलाइट र एचटिएमएलको फारममा डाटा पढ्छन्, तपाईलाई सब भन्दा सटीक र वांछनीय परिणाम दिँदै।
किमोनो एकदम छिटो काम गर्दछ र न्यूजफीडहरू र ट्राभल पोर्टलबाट सामग्री स्क्र्याप गर्दछ। यो प्रोग्रामर र विकासकर्ता को लागी राम्रो छ। यो एचटीएमएल एक्सट्रैक्टरले एक घण्टा भित्र सयौं वेब पृष्ठहरूबाट जानकारी निकाल्दछ। किमोनोले तपाइँलाई छविहरू, भिडियोहरू र पाठको रूपमा डेटा निकाल्न सजिलो बनाउँदछ।
Screen. स्क्रिन स्क्रेपर:
स्क्रिन स्क्र्यापर एक उत्तम स्क्र्यापर हो जुन विभिन्न HTML कागजातहरूबाट सजिलैसँग डेटा हटाउन मद्दत गर्दछ। यो दुबै कठिन र सजिलो कार्यहरू प्रदर्शन गर्न सक्दछ र यसमा लाभ लिनको लागि प्रशस्त नेभिगेशन र सटीक डाटा निकासी विकल्पहरू छन्। यद्यपि स्क्रिन स्क्रेपरलाई प्रोग्रामिंग र कोडिंग सीपको आवश्यक छ। साथै, यो उपकरण दुबै निःशुल्क र प्रीमियम संस्करणमा आउँदछ र तपाईंको HTML फाइलहरूको लागि आदर्श हो।
Scrap उच्च-स्तर सामग्री र स्क्रीन स्क्र्यापिंग प्रोग्राम हो जुन तपाईंको HTML कागजातहरूका लागि राम्रो हो। यो एक शक्तिशाली फ्रेमवर्क हो, वेब पृष्ठहरूको सूचकांक गर्न र ब्लगहरू र साइटहरूबाट सजीलै डाटा निकाल्न। Scrap HTML कागजातहरूको लागि प्रभावकारी छ, र तपाइँ डाटाको गुणस्तर अनुगमन गर्न सक्नुहुनेछ जब यो प्रसोधन भैरहेको हुन्छ।
ParseHub ले कुनै पनि समयमा वेब क्रोलरहरूमा प्रश्नहरूको पुनःनिर्देशन गर्दछ र HTML कागजातहरू पहिचान गर्न उन्नत मेशिन लर्निंग टेक्नोलोजी प्रयोग गर्दछ र तिनीहरूबाट उपयोगी डाटा स्क्र्याप गर्दछ। ParseHub लिनक्स, विन्डोज र म्याक ओएस X का साथ उपयुक्त छ।
Sp. स्पाम विशेषज्ञहरु:
स्पामएक्सपर्ट्स उपकरणले ईमेल स्पाम पहिचान गर्दछ र हटाउछ। यसबाहेक, यो तपाइँको HTML फाइलहरू प्रक्रिया गर्दछ र एक शक्तिशाली HTML एक्स्ट्रक्टर हो। यसका केही उत्तम विकल्पहरू कुनै पनि HTML फाइलको समक्रमण र कन्फिगरेशन हो। यसलाई स्थानीय र क्लाउडमा परिमार्जन गर्न सकिन्छ। स्प्यामएक्सपर्ट्सले बहिर्गमन र आगमन डेटा निगरानी गर्दछ, तपाईंलाई उत्तम सम्भावित परिणामहरू प्रदान गर्दछ।